Wararka - Infinitus Plaza
Guangzhou Infinitus Plaza wuxuu ku yaal Baiyun New Town, Degmada Baiyun, Magaalada Guangzhou, Gobolka Guangdong. Waxaa naqshadeeyay naqshadeeyaha ugu sareeya uguna caansan adduunka, kaasoo loo yaqaanay "Boqorada gooladaha" --- Zaha Xadiid.
Infinitus Plaza wuxuu isku xiraa labada aag qaab taxane ah "siddooyin aan dhammaad lahayn", sida "∞", wuxuu ku hareeraysan yahay beerta dhexdeeda si uu u sameeyo aag isgaarsiineed oo furan wuxuuna soo bandhigayaa iftiin fara badan oo gudaha ah, taas oo u wanaagsan deegaanka, keydinta tamarta una dhow dabeecadda.
Dhamaan aluminium darbiyada daahyada ee aluminium ee loogu talagalay Infinitus Plaza waxaa bixiya shirkadeena --- Yingjiwei warshadda qalabka dhismaha. Daawaha aluminium ee loo yaqaan 'plaza' ayaa badanaa ah 3003 H24 iyo 5083. Si loo hubiyo tayada guddiga, dhumucda wejiga ayaa laga codsanayaa in loo isticmaalo saxan tayo sare leh oo ah 4.0mm iyo 5.0mm. Daaweynta dusha sare ee dahaadhka midabbada badan leh ee loo yaqaan 'PVDF' ee looxyada oo dhan ayaa ka hortagaya roobabka aashitada, qabowga iyo kuleylka, iyo in la hubiyo in badeecooyinku raagayaan oo ay si wanaagsan u muuqdaan.
Qaab-dhismeedkeeda cusub, naqshadeynta hal-abuurka ah iyo heerka xakamaynta tayada ee tayada leh waxay kordhineysaa dhibaatada ka baaraandegidda aluminiumyada, laakiin waxay u hoggaansameysay weligood quusasho la'aan, cilmi baaris iyo shaqo adag oo joogto ah, waxaan ugu dambeyntiina mid mid u hagaajinaynaa dhibaatooyinkaas Si loo muujiyo awooddeena wax soo saar, xoogga la saaro tayada iyo daacadnimada macmiilka, waxaan xitaa u kala saarnaa hal xariiq oo wax soo saar cusub mashruucan. Adeeg macaamiil gaar ah, khadka wax soo saarka madaxbanaan, kooxda jawaabta degdega ah ee naqshadeynta, soosaarka iyo dhibaatada rakibaadda goobta, kuwaas oo dhammaantood aad loo amaanay loona aqoonsaday kooxda Zaha Design Institute iyo macmiilka.
Mashruuca Guangzhou Infinitus Plaza wuxuu ku dhow yahay inuu dhammaado, wuxuu noqon doonaa aag cusub oo Guangzhou ah iyo mid ka mid ah mashaariicda ugu wanaagsan adduunka.
Sida warshadeenna, waxaan diyaar u nahay loolanka cusub ee mashruuc kasta, dhibku nama garaaci lahaa, laakiin wuxuu naga caawin lahaa inaan sii xoogaysano oo aan awoodno. Meeshii dardaaran ah, waxaa jira Yingjiwei.